12 Khiyaanooyinka Safarka ee Waaweyn Si Caalamka Looga Fogaado | Save A tareenka
Home > Talooyin ku Socda > 12 Khiyaanooyinka Safarka ee Waaweyn Si Caalamka Looga Fogaado
Waqtiga Akhriska: 9 daqiiqo
Adduunku waa meel qurux badan, laakiin safrayaasha markii ugu horeysay waxay ku dhici karaan dabin dalxiis waxayna noqon karaan dhibanayaal khiyaanooyinka safarada waaweyn. Kuwanu waa 12 khiyaanooyinka safarka ee waaweyn si looga fogaado adduunka oo dhan; Yurub ilaa Shiinaha, iyo meel kasta oo kale.
1. Khiyaanooyinka Safarka Si Aad Uga Fogaato Adduunka: Taksi dheeraad ah - Wareeg
Gaadiid fara badan, tagsiilaha oo kuu sheegaya sheekooyinka magaalada, iyo aragtiyaha cusub ee daaqadda ka dhigayaa mid aad u fudud inaad ku dhacdo taksi xad-dhaafka socdaalka.
Inaad tagsi ku wareegto waxay umuuqataa xulashada safarka ee ugu raaxada badan dalxiis ahaan, laakiin waxay noqon kartaa mid ka mid ah khiyaanooyinka safarka ugu weyn adduunka. Dalxiis ahaan ma ogaan doontid wadada ugu dhaqsaha badan uguna fiican ee garoonka diyaaradaha ilaa hudheelka, ama ka soo jiidasho mid kale, markaa taksiilayaashu waxay kuugu dabaaldegi karaan magacaaga waxayna ku weydiisan karaan qiime aad u xun ama waxay kuu qaadi karaan leexasho weyn, safar aan ka badnaan doonin 15 i.
Sida Looga Fogaado Taksiga dheeraadka ah?
Daraasad hore ugu samee heerka taksi ee la aqbalay ee ku jira caga safarka. Intaa waxaa dheer, hubi inaad haysato barnaamij khariidad weyn, taasi uma baahna Wi-Fi, markaa waad hubin kartaa wadada marwalba, iyo ugu muhiimsan, dooro shirkad taksi oo lagu kalsoonaan karo, ama tareen ku raaco.
2. Daadinta Dharkaaga - Khiyaanada Qoolleyda
Haddii aad qorsheyneyso inaad u safarto Argentina, tusaale ahaan, waa inaad ka warqabtaa qoolleyda ku daatay dharkaaga khayaanada safarka. Noocan ah khiyaanada safarka ayaa caan ka ah Buenos Aires, kolka xaafad saaxiibtinimo timaadda ay kuu soo dhowaato, doonaya inaad ku caawiso maaddaama uu daadanayo dhammaan dharkaaga.
Ka soo qaad in aad bogaadineyso bartamaha magaalada ama aad maalin weyn ku leedahay beerta nasashada, hareeraha fiirinaya, oo si lama filaan ah ayaa shisheeye saaxiib kuu ah kuugu yimaadaa, adiga oo ku ogeysiinaya inuu daadanayo dharkaaga oo dhan. Bacda dhulka ayaad dhigaysaa, hareerahaaga fiiri adigoo yaaban daadinta, isla markaa baasaboorka, jeebka, Waxyaalahaagii qaaliga ahaa oo dhammuna waa dhammaadeen.
Sida Looga Fogaado Khasaaraha Ku Yimid Dharka Khiyaanada Safarka?
Sahmi sidii qof maxalli ah, la soco hareerahaaga, iskuna day inaad indhahaaga hore u sii hayso.
3. Khiyaanooyinka Safarka Si Aad Uga Fogaato Adduunka: Qiyaanada Safarka ee ATM
Lacagta ayaa adduunka ka dhigeysa mid wareegaya, marka sida iska cad mid ka mid ah khiyaanooyinka safarada adduunka ugu weyn ayaa ku lug leh lacag. Mid ka mid ah khiyaanooyinka safarka adduunka ugu weyni waa khiyaanada ATM marka aqristaha kaarka deynta laga saari karo asal ahaan nuqulo aqoonsiyadaada ka dibna u adeegsado inuu ku nadiifiyo dheelitirkaaga oo dhan.
Sida Looga Fogaado Khiyaanada ATM-ka?
Haddii ay gabi ahaanba lama huraan tahay, lacag ka soo qaado bangiga weyn ee ATM. In bangiyada waaweyn ee Yurub, amaan ayaa jira, markaa fursadaha helitaanka akhristayaasha kaarka ATM-ka ayaa ku dhow eber.
4. Bump Iyo Qabasho
Mid ka mid ah khiyaanooyinka safarka caadiga ah ee adduunka, kuuskuus iyo qabsasho ayaa caan ku ah gaadiidka dadweynaha, iyo astaamaha dhulka. Waxaad dhacaysaa inaad tareenka saarto, metro, ama ku sugaya barxadda Prague saacadda caanka ah markii si lama filaan ah qof si lama filaan ah kuugu soo boodo.
Intay shil noqon karto, waxay u dhowdahay inay tahay isku dhac lacageed oo qorshaysan. Waxay noqon kartaa laba ilbiriqsi, a “ka xumahay”, iyo boorsada jeebkaaga, daawo, ama dahabku ka dhammaaday. Khayaanada ku-soo-boodka iyo khiyaanada la-qabsigu waa mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga warqabo goorta safraya Europe.
Sida Looga Fogaado Bugta Iyo Qabashada?
Hantida qaaliga ah uga tag qolka hoteelka, kuna faafi wax kasta oo aad wadato: jeebka jeebka jaakada gudaha tusaale ahaan.
5. Khiyaanooyinka Safarka Si Aad Uga Fogaato Adduunka: Raxmadii
La mid ah kuuskuus iyo qabsasho, khayaanada raxan raxan, waa markii aad si lama filaan ah kuugu soo buux dhaafiso koox shisheeye ah, si fiican inay umuuqdaan inay shisheeye yihiin. Dhab ahaan, shisheeyahaan sifiican ayey iskaga yaqaanaan, oo si qurux badan loo qorsheeyey kulan lala yaabo, ama raxan. Sidan oo kale waxay umuuqataa gebi ahaanba mid aan waxba galabsan, intaad ku hareeraysan tahay oo jeebka lagugu haysto.
Tani waxay badanaa ku dhacdaa meel dadku ku badan yahay, halka ay kooxdani ku dhex milmaan dadka iyo fowdada. Waxay bilaabayaan inay kugu wareegaan oo runti way kaa mashquuliyaan sida kuwa kale wax walba u qabsadaan. Kaydinta lacagtaada hal meel waa mid ka mid ah 10 khaladaadka safarka waa inaad ka fogaataa Yurub.
Sida Looga Fogaado Khiyaanada Duufaanta?
Si fudud iskaga fogee dadka, Koodhkaagana ku dheji, ama isha ku hay waxyaabahaaga, doorbidayaa, boorso kasta ha ku hor dhigto.
6. Deegaanka saaxiibtinimada leh
Shisheeyaha quruxda badan iyo saaxiibtinimadu waa khiyaano safar adduunka oo dhan caan ku ah. Haddii aad ku socotid Fagaaraha Cas ama Paris, had iyo jeer waxaa jiri doona saaxiibtinimo maxalli ah oo bixisa caawimaaddooda si ay u gaaraan Eiffel Tower ama ay kuu tusaan wakhti fiican oo magaalada ku wareegsan.
Waxaa intaa dheer, waxay kaa caawin doonaan muujinta dhamaan naadiyada waa weyn ee ku hareeraysan, in aad khiyaanada kaliya sameyn doonto subaxa dambe, soo tooso, iyo inaad ogaato lacagtaada way wada dhammaatay. Sayidka, safar kali ah tusaale ahaan, adduunka oo dhan wuxuu noqon karaa fursad aan caadi ahayn oo lagula kulmo dadka deegaanka, laakiin sidoo kale waxay isu beddeli kartaa riyooyinkaagii ugu xumaa.
Sida Looga Fogaado Khiyaanada Safarka Maxaliga ah ee Deegaanka?
La kulanka dadka deegaanka safaradaada waa wax weyn, iyo mid ka mid ah khibradaha ugu fiican. Si kastaba ha ahaatee, ka taxaddar cidda aad ku kalsoon tahay, oo habeen la qaato. Dalxiis dal shisheeye wuxuu si dhakhso leh ugu beddelaa masiibo, markaa taxaddar.
7. Khiyaanooyinka Safarka Si Aad Uga Fogaato Adduunka: Khiyaanada Jijin
Free hadiyadihii dal shisheeye dhawaaq cajiib ah, laakiin runtii ma jiraan waxyaabo bilaash ah adduunka aan ku nool nahay. Sidaa darteed, ha u dhicin khiyaanada jijimadda lacag la’aanta ah ee badanaa ku lug leh haweeney maxalli ah oo kuu soo dhoweysay iyada oo dhoolla caddaynaysa, si aad u geliso jijin gacantaada.
Dhoolacadayn iyo saaxiibtinimo, waxay ku siin doonaan dugaagado ama silsilado dhab ah oo aad guriga ku qaadan karto, halka waqtiga oo dhan ay gacanta kale ay gaarayaan boorsadaada, iyo dahabka. Bixinta wax qurux badan oo bilaash ah ayaa ah mashquul weyn waxayna ka shaqeysaa dalxiisayaal badan oo aan waxba galabsan.
Sida Looga Fogaado Khiyaanada Jijin?
Ha u dhicin xusuusin bilaash ah, oo kaliya indhahaaga fur, oo si naxariis leh u diido inaad ka aqbasho wixii lacag la’aan ah ee shisheeyaha laga helo.
8. Cunuga Dawarsanaya
Ku labisan dhar xun, wasakh ah, tuugsi lacag ama cunto, ilmaha dawarsanaya waa mid ka mid ah khiyaanooyinka safarka wadnaha ee adduunka. Laga soo bilaabo Yurub ilaa Shiinaha, waxaa jira caruur taagan wadada dhinaceeda, ku heesaya hal doolar fagaarayaasha dhexe, ama ku garaacdo daaqada taksiga.
Badanaa caruurtani maaha kuwo lumay sida ay u egyihiin, laakiin loo diray inay door ka ciyaaraan. Sida iska cad, waxaa jira caruur runtii u baahan cunto iyo caawimaad.
Sida Looga Fogaado Khiyaanada Ilmaha?
Tani waa khiyaano maxaa yeelay adduunka waxaa ka buuxa carruur sabool ah oo aan haysan wax kale oo aan ka ahayn dawarsiga. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u soo bandhigi kartaa inaad u iibsato cunto ama aad uga caawiso qaab kale, intii aad lacag siin lahayd. Sidan, waad hubin kartaa falcelintooda, iyo haddii ay runtii u baahan yihiin ama uun boorsada dalxiiska.
9. Khiyaanooyinka Safarka Si Aad Uga Fogaato Adduunka: Soojiidashada Waa Xidhantahay
Waxaad hubisay saacadaha furitaanka kahor, laakiin waxaad la yaabaysaa markaad timaaddo macbudka ama aad dukaamaysato qof maxalli ahi wuxuu kuu sheegayaa inuu xidhan yahay. Markaasuu, markay arkaan niyad jabkaaga, waxay kuu soo bandhigayaan inay ku geynayaan meel kale oo caan ah ama dukaan, xitaa ka fiican kan xiran.
Dadka deegaanka ayaa laga yaabaa inay bixiyaan tacabur la yaab leh, laakiin runti way kaa kaxeynayaan, adoo codsanaya khidmadda gelitaanka ee qaaliga ah, ama kuu geynaya wax adeegis ah halka ay ka helayaan guddi dufan leh.
Sida Looga Fogaado Khiyaanada Safarkan?
Booqashada meelaha ka baxsan-garaacista waa cajiib, kaliya hubi inaad fiiriso hareeraha iyo haddii ay jiraan waxyaabo kale. Intaa waxaa dheer, cilmi baaris horay ugu soo jiidashada ugu wanaagsan ee lagu booqdo Yurub. Haddii soo jiidashada ay lacag la'aan tahay, markaa ma jirto sabab loogu beddelo mid qiimo jaban, oo la mid ah dukaamada leh dib u eegista weyn.
10. Aan Sawirkaaga Qaado
Safarka kali ayaa noqon kara wax cajiib ah, mararka qaarna qoomamo buuxda ma jiro qof kula jooga oo sameeya sawirka saxda ah ee warbaahinta bulshada. Big Ben ama Firenze ee asalka ah, waxaad fiirineysaa hareeraha ka dibna waxay kuugu imaanayaan iyagoo kuugu deeqaya sawir yaab leh, xagal weyn.
2 ilbiriqsiyo ka dib kaamiradaadii iyo sawirradii waaweynaa oo dhan ayaa dhammaaday, maxaa yeelay shisheeyaha quruxda badan ayaa la orday iyaga. Tani waxay ka dhici kartaa meel kasta oo adduunka ah, qofna, maxaa yeelay waa maxay caqabadaha ay tani dhici doonto? laakiin way dhacdaa.
Raadi dalxiisayaal kale, laga yaabee safrayaal keli ah sidoo kale, ama lammaanaha. Tani waa habka ugu aaminka badan ee lagu heli karo sawirka saxda ah isla markaana lagu ilaaliyo kaamirada, iyo isweydaarsiga, u soo bandhig sawirkooda.
11. Khiyaanooyinka Safarka Si Aad Uga Fogaato Adduunka: Switcheroo
Habka ugu wanaagsan ee loo maareeyo lacagta marka la safrayo waa in mar walba lagugu haysto biilasha yaryar. Haddii kale, ka taxaddar biilasha waaweyn, markaad lacag siineyso taksiilayaasha ama makhaayadaha maxalliga ah. Waxaad ku bixin laheyd biil weyn oo ah lacag yar, laakiin qaateyaashu waxay iska dhigayaan inay daadiyeen biilka weyn oo ay ugu badalayaan biil aad u yar. Sidan, waxay ku beddelaan dalxiis.
Lacagta, darawallada tagaasida, ama waardiyeyaal, waxay noqon karaan ciyaartoygan khiyaanadan switcheroo ah. Waxaad noqon doontaa guuldaradii weynayd halkan, hadaan laga taxadarin.
Sida Looga Fogaado Khiyaanada Switcheroo?
Sheeg inta biilasha aad dhiibayso, ogowna isbedelka ay tahay inaad dib u hesho.
12. Khiyaanooyinka Safarka ee Waaweyn Si Caalamka Looga Fogaado: Ardayda Ingiriisiga ah ee Xiisaha Leh
Waxay ku hadlaan Ingiriis jajaban laakiin way kaa baryayaan inaad wax barto. Ardayda xiisaha leh ee Ingiriisiga ah ayaa ku dhuumaaleysanaya makhaayadaha iyo baararka, ayaa kula bilaabi doona wadahadal saaxiibtinimo, ka dibna ku weydiin cashar Ingiriisi ah oo gaar ah qolkaaga hudheelka.
Mar hudheelka, ardayga xiisaha leh ee Ingiriisiga ah wuxuu isu rogi karaa cawo-habeen, oo waxaad ku soo toosaysaa boorsada la xaday iyo baasaboor. Runtu waa wax aan macquul aheyn in lagu horumariyo xirfad luqadeed habeennimo, oo xitaa qof ayaa raba inuu ku dhaqmo Ingiriisigiisa, casharkani maaha inuu ka dhaco qolka hudheelka ama khamriga.
Gebogebadii, safarka caqliga badan ayaa ah habka ugu wanaagsan ee maalmahan loo safro, meel kasta oo adduunka ah. Sababta ayaa ah khiyaanooyinka safarka oo marba marka ka dambeysa sii adkaanaya in la muujiyo. Taas ayaa la yiri, weligeed ma fududaan in adduunka oo dhan lagu safro marka loo eego maanta.
halkan at Save A tareenka, waxaan ku farxi doonnaa inaan kaa caawino qorsheynta Goobaha Xiisaha Leh ee Aad Booqan karto kuna dhameysan karto safarkaaga farxad adigoo iska ilaalinaya Khiyaanooyinka Safarka.
Ma rabtaa inaad ku dhejiso bartayada blog-ka "12 Khiyaanooyinka Safarka ee Weyn Si Aad Uga Fogaato Dunida" boggaaga? Waxaad ka qaadi kartaa sawiro iyo qoraal iyo na siiso credit la link a si post blog this. Ama guji halkan: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fso%2Ftravel-scams-avoid-worldwide%2F- (wax yar hoos si aad u aragto Code Cudarada ah)
commontravelscamsineurope MajorTravelScamsToA avoWorldwide Khiyaano Dalxiisyada Dalxiiska Safarada traveltips